Uyenza njani i-Superscript yesiqhelo kunye ne-Subscript kwi-Word 2013 Amaxwebhu
ILizwi 2013 likuvumela ukuba wenze ngokwezifiso izinto ezininzi ezahlukeneyo kumaxwebhu akho ukukuvumela ithuba lokwenza uxwebhu lwakho luvele kanye ngendlela obucinga ngayo. Enye yezinto onokuzenza ngokwezifiso yimibhalo yakho ephezulu kunye nemirhumo.
Ungabutshintsha ubume bokuma nkqo bomlinganiswa, uyihambise phezulu okanye ezantsi ngokunxulumene nabanye abalinganiswa abayijikelezileyo. Oku kuluncedo, umzekelo, xa ufuna ukuhlengahlengisa indawo yokubhaliweyo okanye ubhaliso. Ngokuhlengahlengisa indawo yomlinganiswa, unokunyusa okanye unciphise inani lokunyusa okanye ukunciphisa.
Umbhalo ongaphezulu abalinganiswa baphakanyiswa isixa esithile ngaphezulu kwesiseko, kwaye umrhumo abalinganiswa bathotywe isixa esithile.
Kuxwebhu lweLizwi 2013 olufuna imirhumo okanye imibhalo ephezulu, cofa ukuhambisa indawo yokufaka emva kwesiganeko senqindi esidinga umbhalo ongaphezulu.
Kulo mzekelo, isiganeko sokuqala senzeka emva kwe- $ 90,000 kumqolo wesithathu wetafile, kwaye sifuna umbhalo ophezulu we-1.
Khetha u-1 osandula ukumchwetheza, kwaye ukhethe iKhaya → iSuperscript yokwenza umlinganiswa ube mncinci kwaye uyiphakamise ngaphezulu kwesiseko.
Qaphela indawo ekuyo u-1 ngokunxulumene nokufutshane. Ngoku u-1 ungaphezulu, kwaye mncinci kuno-0.
I-prednisone dosing ye-bronchitis
Ukwenza ngokwezifiso i-superscript ye-1, kunye ne-1 ekhethiweyo, cofa ibhokisi yencoko yababini yeqela lamagama, uvule ibhokisi yencoko yababini.
Kwi-Advanced tab, ukusuka kuluhlu Indawo yokuhla, khetha unyuswe. Kwibhokisi Ngebhokisi, shiya ukuseta okungagqibekanga kwamanqaku ama-3 njengoko kunjalo, kwaye ucofe u-Kulungile.
Qaphela ukuba i-1 ngoku iphezulu kakhulu kune-0 ecaleni kwayo.
5. Gcina uxwebhu.
Ukwenza ngokwezifiso imirhumo, landela ezi zikhombisi kwakhona, kodwa ukhethe ukuthoba endaweni yokuphakamisa.
ithatha ntoni iflagyl
itshathi yokutya yabantwana
ufikelela njani kwi-icloud kwi-mac
yintoni i-asidi eyenziwe ngayo
Inkqubo ye-rocephin yesenzo
i-nyquil inegazi elincinci
Iziphumo zeepepcid ixesha elide
Umthamo weasprini kubantu abadala